Diyaarinta dhalashada | USAHello | USAHello
Aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay dhalashada Mareykanka. Akhri wax dheeraad ah
Baro sida loo codsado dhalashada. Akhri wax dheeraad ah
Ku buuxi foomka N-400
Boggan waxaa kaa caawin doona inaad buuxiso foomka N-400. Akhri wax dheeraad ah
Baro waxa dhici doona inta lagu guda jiro wareysiga jinsiyadda lagaa qaadayo. Akhri wax dheeraad ah
su'aalo wareysi Citizenship
Waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo badan marka wareysiga dhalasho qaadashada. Akhri wax dheeraad ah
Waxaa muhiim ah in la ogaado waxa erayada ku N400 foomka hoose. Akhri wax dheeraad ah
Civics tijaabiyo su'aalaha iyo jawaabaha ku qoran luqaddaada
Raadi PDFs bixi karo oo ka mid ah su'aalaha imtixaanka cilmiga bulshada ee 9 luqadood. Akhri wax dheeraad ah
Saxiix for our fasalka udiyaarin dhalashada free. Akhri wax dheeraad ah
cod-markii ugu horeysay: qaxootiga A cod markii ugu horeysayNoqoshada a cod--markii ugu horeysay ee USA waxay noqon kartaa waayo-aragnimo cajiib ah. waraysiyo USAHello-markii ugu horeysay ka cod-saabsan sida ay dareensan
Diiwaangeli in ay codeeyaan: Tilmaame loogu talagalay qaxootiga iyo doolkaCodbixintu waa qayb muhiim ah in muwaadin ah ee USA. Akhri macluumaadka ku saabsan cidda wax dooran karta iyo sida aad iska diiwaan gelin kartaa in ay codeeyaan.
Noqday muwaaddin Mareykan ahNoqoshada muwaadin USA waa xiiso leh oo cusub. Waxaad ka heli xuquuqda dheeraad ah iyo mudnaanta. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in macasalaameeyo dhalashada ee gurigaaga